Otú nyefee music si iPod aka ka kọmputa
> Resource> iPod> otú nyefee Music si iPod aka ka Computer
Ọ bụ ihe siri ike nyefee music si iPod aka ka kọmputa, n'ihi na iTunes naanị ka ị mmekọrịta songs gị iPod aka. Otú ọ dị, n'ihi na tọn ihe mere, i nwere ike ịbụ ọkụ n'obi idetuo songs na listi ọkpụkpọ azụ gị na kọmputa maka ndabere ma ọ bụ òkè. Ka ihe atụ, ị na-iTunes listi ọkpụkpọ site na ihichapụ ha accidently ma ọ bụ mgbe gị na kọmputa mkpọka, niile music faịlụ na kọmputa gị na-efu.
Ebe ọ bụ na iTunes bụ enweghị enyemaka, ihe ị ga-eme idetuo music si iPod aka ka kọmputa? N'ezie, e wezụga iTunes, ebe a bụ ihe dị mfe na-eji usoro ihe omume - Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ bụghị nanị na-eme ihe iTunes nwere ike, ma anụ ọhịa bea ọzọ salient atụmatụ. Na ya aka, ị na-enwe ike mbupụ ma songs na listi ọkpụkpọ gị na kọmputa na ala. Ọzọkwa, ọ na-ahapụ gị nyefee music site na kọmputa gị iPod aka kwa.
Na nzọụkwụ n'okpuru, anyị na banyere igosi gị otú ị ịkwaga music gị Windows kọmputa. Ọ bụrụ na ị chọrọ nyefee iPod music gị Mac, ibudata Mac version. Mgbe ahụ na-eduzi nzọụkwụ ndị a site onwe gị.
Nzọụkwụ 1. Wụnye a usoro na jikọọ na gị iPod aka na PC
Ná mmalite, wụnye na-agba ọsọ a usoro na kọmputa. Jikọọ gị iPod aka na kọmputa na eriri USB. Nke a na usoro ga-chọpụta ya ozugbo ọ ejikọrọ.
Cheta na: Ebe ọ bụ na Wondershare TunesGo kwesịrị inwe iTunes si ụlọ ọrụ, ị kwesịrị ibudata na ịwụnye iTunes na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Nyefee music si iPod aka ka kọmputa
Iji nyefee songs na kọmputa, ị nwere ike pịa "Iji nchekwa", bọtịnụ na ala akara nke bụ isi window.
Ma ọ bụ, ịkwaga songs na listi ọkpụkpọ site na gị iPod aka ka kọmputa, na ị na-enwe ike pịa "Media" button na ekpe ndekọ osisi. N'elu akara, pịa "Music" button.
Mgbe ahụ, họrọ songs na ị na-ekpebi mbupụ na pịa "Export ka". Mgbe ndọpụta ndepụta egosi na n'elu, họrọ "Mbupụ na My Computer". Nke a na-elu a obere faịlụ nchọgharị window. Họrọ a zọpụta ụzọ na kọmputa gị na-echekwa ndị a songs.
Cheta na: TunesGo (Windows) bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod aka 5, iPod aka 4 na iPod aka 3 na iOS 9/8/7/5/6. The Mac version akwado iPod aka 5/4 na-agba ọsọ iOS 9,8,7, 5, & 6. Click ebe a iji nweta ihe Ama banyere akwado iPods.
Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ listi ọkpụkpọ na gị iPod aka, ị nwekwara ike akpali ha ka ha na kọmputa gị. Pịa "Playlist" na-egosi na playlist window. Họrọ gị chọrọ playlist na pịa "Export ka".
N'agbanyeghị ma ị na-akpali music si iPod aka ka kọmputa ma ọ bụ mmekọrịta listi ọkpụkpọ iji kọmputa, ị kwesịrị ị na-iPod aka ejikọrọ.
Cheta na: The Mac version adịghị ka ị mbupụ listi ọkpụkpọ iji Mac.
E wezụga na-ebufe songs si iPod aka ka kọmputa, ị nwekwara ike nyefee music si iPod aka azụ iTunes n'ọbá akwụkwọ kwa.
The video on ebufe music si iPod aka ka kọmputa